Rabbigu waa adhijirka i jira - The Lord is my shepherd / Somali language christian book - Psalms illustrated with photos / Somali-English bilingual / Paperback 2014 - bibleinmylanguage
LANGUAGE: Somali - English
Psalm 23 in Somali
1 Rabbigu waa adhijirka i jira; waxba u baahan maayo.
2 Wuxuu i fadhiisiyaa doog qoyan dhexdiis, Oo wuxuu ii hoggaamiyaa biyaha deggan dhinacooda.
3 Naftayda wuu soo celiyaa. Oo magiciisa aawadiis wuxuu igu hor kacaa waddooyinka xaqnimada.
4 In kastoo aan ku dhex socdo dooxada hooska dhimashada, Sharna ka baqi maayo, waayo, waad ila jirtaa, Ushaada iyo hangoolkaaga ayaa ii raaxeeya.
5 Cadaawayaashayda hortooda waxaad iigu diyaarisaa miis, Oo saliid baad madaxayga ku subagtaa, koobkayguna waa buuxdhaafaa.
6 Hubaal cimrigayga oo dhan waxaa i raaci doona wanaag iyo naxariis, Oo weligay guriga Rabbiga ayaan degganaan doonaa.
Somalian Bible Text taken from Kitaabka Quduuska Ah
Bibletext English langueage taken from The Holy Bible, New International Version
Click the button below to add the Rabbigu waa adhijirka i jira - The Lord is my shepherd / Somali language christian book - Psalms illustrated with photos / Somali-English bilingual / Paperback 2014 to your wish list.